Pfungwa ye rakapotsa chokwadi kana VR haisi nyowani hazvo. Yange ichitenderera munzvimbo ye tech kweanoverengeka emakore, asi nguva pfupi yadarika, tekinoroji yakapaza nemimwe mirefu mirefu.
Mumakore achangopfuura, aya mahedhifoni eVR ave kuwedzera uye kuwanika zvese zviri zviviri maererano nemutengo uye nekushandisa. Inogona kunge yakatanga nemidziyo senge Kadhibhodi yeGoogle kuvhura gonhi kune chero munhu ane smartphone, asi kunyangwe iwo ekumusoro-ekupedzisira mahedhifoni ave nyore kushandisa uye anonyanya kufadza futi.
Michina yemitambo yemazuva ano zvakare anokwanisa uye anogona kubatsira kuendesa akafanana nehupenyu nharaunda munzvimbo yekunyaradza kweimba yako uye izvi zvinoita kuti ive nguva inonakidza yeVR.
Isu takanyora mamwe epamusoro maVR masisitimu anowanikwa mune ino ficha zvichibva pamahedhifoni atakaedza, kunakidzwa uye kuongorora.
Iyo HTC Vive cosmos ndeimwe yezvazvino zvinowedzerwa kuHTR headset line-up uye pakutanga aive mukwikwidzi kuOculus Rift S ine mukati-kunze kwekutevera uye nzira iri nyore yekumisikidza kupfuura yapfuura Vive mahedhifoni. Iyo yekutevera yakanga isina kukwana zvakadaro, saka ikozvino HTC yaburitsa yepamusoro HTC Vive Cosmos Elite. Kunyanya-kuchenjera iyi ndeimwe yeakanakisa mahedhifoni eVR pane iyo runyorwa, isu takaiwanawo yakagadzikana, inokwanisa uye inonakidza kushandisa.
Iyo inodhura, asi ine Nice ficha yakatarwa inoita kuti zvikoshe kutariswa, zvakatowanda izvozvi nehukuru hwekutevera kugona.
HTC Vive cosmos Elite ongororo: Yakanakisisa VR musoro musoro zvakadaro?
The Oculus Rift S ndiyo mureza weVR headset kubva kuOculus. Yakagadzirirwa sekutsiva iyo yekutanga Rift headset (iyo ichiri yakanaka kutenga kana uchikwanisa kuitora yechipiri ruoko) uye inoratidzira huwandu hwesainzi hunoita kuti ive yakakodzera kuongorora.
Iyo Rift S ndeye tethered chaiyo chaiyo misoro inoda iyo yakanaka PC yemitambo kuti umhanye, asi unopa chiitiko chinonakidza chekutamba nemavara anoyevedza, odhiyo uye kamuri-sikero yekutamba. Iyi headset yakagadzirirwa ne "mukati-kunze" kuteedzera zvichireva kuti ese ma sensors akavakirwa mukati mechigadzirwa uye nekudaro, ndeimwe yeakareruka maPC akasungirirwa mahedhifoni ekushandisa.
Chikamu chakanakisa ndeye Oculus Rift S inoenderana nemitambo yeRift uye unogona kutenga zviitiko zvitsva kubva kuSteam kana kuchitoro cheOculus. Izvi zvinoreva kuti pane mukana wezviuru zvemitambo, saka zvakawanda zvekutamba. Iyo zvakare yakasununguka, inokwanisa uye inonakidza inonakidza kubhuita.
Best Oculus Rift uye Oculus Rift S mitambo uye zvakaitika zviripo
IHTC Vive Pro ndiyo yakagadziridzwa uye yakagadziridzwa vhezheni yeiyo yekutanga HTC Vive uye yakadzikwa neHTC se "nyanzvi-giredhi" VR headset. Iine huwandu hwepikiseli hwakawedzera, resolution yakagadziriswa uye yakagadziridzwa odhiyo inosanganisira iyo Hi-Res yakasimbiswa mahedhifoni uye enzvimbo inonzwika kugona, iyi headset ndiyo yepamusoro peiyo VR ruzivo.
IHTC Vive Pro inoda muchina une simba kuti umhanye zvakanaka, asi ichapururudza masokisi ako. Iyi headset inotora hwaro hwakasimba hweiyo yekutanga Vive headset uye inovandudza pavari munzvimbo dzese. Inonyanya kugadzikana, inotaridzika zvinotaridzika uye inopa inoshamisa inonyudza yemitambo ruzivo.
Iyi headset inouya nehurefu hwemutengo tag kunyangwe, zvakada kufanana nePC yemitambo iwe yauchada kuimhanya. Iwe unowana izvo iwe zvaunobhadharira hazvo uye uye iyi headset pasina mubvunzo ndiyo yakanyanya kunaka VR ruzivo parizvino.
Kana pasuru iyi isinganzwika seinokwezva zvakakwana, unogona kugara uchimwaya imwe mari pane imwe vhezheni yeVive Pro iyo ine yekutarisisa maziso yakavakirwa mukati mayo futi. Iyo HTC Vive Pro Ziso kunongedzera kune ramangwana reVR uye zvemahara-zvemahara uye zvemitambo zvakare.
Verenga ongororo yedu yakazara: HTC Vive Pro ongororo: Iyo yakanakisa VR ruzivo, bhaa hapana… kana uchikwanisa kuitenga
Iyo Oculus Kutsvaga inonakidza misoro kubva kuOculus inomiririra yepakati-pasi yeiyo chaiyo chaiyo yekutamba. Icho chakazvimirira chishandiso chinorongedza imwe yakangwara Hardware iyo inobvumidza kune matanhatu madigiri erusununguko kufamba nekuda kwekuvaka-mukati yekutevera. Izvo hazvidi kuti ubatwe nePC yemitambo kana foni kuti umhanye uye zvakadaro inokwanisa kuendesa zvimwe zvinonakidza zvemitambo zviitiko.
Iyo Oculus Kutsvaga zvakare inopindirana-neayo mamwe maOculus mahedhifoni, zvichireva kuti kana iwe uine yako imwe, unogona kutamba neshamwari idzo dzine Oculus Rift isina matambudziko zvachose. Iyo Quest yakakura uye iri nani kupfuura iyo Oculus Go (inoratidzwa kumwe kunhu mune ino runyorwa) uye iri yakanaka yepakati-chikamu chikamu kune avo vari kutsvaga kupinda muVR yemitambo nenzira yakakomba.
Iyo Quest zvakare inonakidza dzimwe nzira futi. Ichangopfuura kuwedzera kwekutevera-ruokosemuenzaniso, kugunun'una kune ramangwana rinonakidza remitambo yeVR. Iwe unogona zvakare kuseta iyo Kutsvaga kuPC yemitambo uye kutamba mitambo yakagadzirirwa kuitirwa paOculus Rift S futi, iri ace.
Panzvimbo pekupa yakazara VR system, Sony's PS VR chishongedzo cheiyo PS4, PS4 Slim uye PS4 Pro zvinonyaradza, zvichireva kuti hazvina kudhura kuva nazvo pane chimwe chinhu senge Oculus Rift kana HTC Vive.
Musoro wemusoro pachawo hauna mutengo kupfuura iwo mahedhifoni eVR akagadzirirwa PC uye koni kuimhanyisa yakachipa zvakare. PlayStation VR inoshandisa matekinoroji akafanana neaya mamwe, kunyangwe kugadziriswa kwescreen kuri pasi pane ayo anoshandiswa neHTC neOculus.
Iyo inoteedzera kufamba kwemusoro wako uye inoshandisa iyo PlayStation Kamera, pamwe chete neyakajairika yako PS4 controller kana PlayStation Mira mafambiro ekufambisa, kuratidza iyo VR chiitiko. Uku ndiko kuwedzerwa kwePS4 yako, iyo ingangoiona seyakareruka sarudzo yeVR kune vakawanda.
Iko kune moyo mutsetse-up yezvinyorwa zviripo, ine Resident Evil 7, Driveclub VR, Skyrim VR, Doom VFR, Gran Turismo Sport uye nevamwe vese vanotsigira PS VR.
PlayStation VR inobvisa yakawanda yezvipingamupinyi kuchokwadi chaicho nekuti chishongedzo kuchikuva chiripo. Inounza mitambo yemamvura kune yako iripo koni uye inowanikwa zvakanyanya.
Verenga ongororo yedu yakazara: Dreamcast VR
Oculus Go ndeye-ye-ese-imwe mahedhifoni anoenderana nepuratifomu chikuva. Iyo nhanho kumusoro kubva kuSamsung Gear VR mukuti haidi foni kuti imhanye. Iyo zvakare ine zvirinani zvirevo zvinosanganisa yakakwira-resolution resolution (2560 x 1440 WQHD resolution) uye isina waya spatial odhiyo. Iine mutengo unonzwisisika, iyo Oculus Go inzira isingadhuri uye inowanikwa nyore nyore yekupinda muchokwadi chaicho.
Iyi headset inoenderana nezvose zviitiko zviripo izvozvi zveiyo Samsung Gear VR - zvinoreva pamusoro pemitambo chiuru, maapplication, mavhidhiyo uye nezvimwe. Zvakareruka zvakare kutora uye kushandisa, saka yakanaka pokutangira kune chero munhu anotarisa kupinda muVR pasina mari yese inouya nezvimwe zvishandiso zvinoda foni kana PC yekutamba kuti imhanye.
Verenga ongororo yedu yakazara: Oculus Go ongororo: Inodhura VR kune vazhinji
Google kabhodhi yakatanga kuvhurwa muna2014, seyakanyatso kupetwa makadhibhokisi mudziyo unogona kuiswa smartphone. Runako rweGoogle Kadhibhodhi rakapetwa kaviri: chekutanga, mutengo wehardware unenge uri mushoma, kazhinji wakasununguka, uye chepiri, ndeyepasi rose, uchitsigira akasiyana siyana mamodheru efoni - zvakanyanya, chero chinhu chinokwana kumberi uye kugara wakachengeteka.
Google Cardboard yaive chimwe chinhu chebudiriro, ichibvumira vanhu kuti vayedze zvemukati zveVR (ngazvive izvo kubva kuGoogle kana kumwe kunhu), pasina kuisa mari mune yakasarudzika sisitimu: Google yakataura kuti mamirioni mashanu emaKadhibhodhi vataridzi vakanga vatumira kusvika ku2016.
Google ine huwandu hwekushandisa kwechigadzirwa, uye yakaratidza VR yekusimudzira nekudyara mune ramangwana. Zvakakosha, Kadhibhodhi harisi iro chete rinoona makadhibhokisi, asiwo zita reiyo VR chikuva kubva kuGoogle, ikozvino yakasimudzwa naDaydream.
Kadhibhodhi inonyatso shambadza VR muoni: hapana bhanhire remusoro uye kana paine zvingave zvisina kugadzikana kupfeka, pachinzvimbo chinotarisirwa kubatwa kumeso kuti uone zvirimo. Kune akatiwandei eKadhibhodhi maapplication ezvemukati, pamwe nekugona kuona mazana matatu enharaunda senge Google Street View kana kutarisa mazana matatu nemakumi matatu paYouTube.
Kadhibhodhi zvine musoro: kana iwe uchida kunyudza chigunwe chako muVR usingashandise mari yakawanda, ino inzvimbo yakanaka yekutanga.
Verenga ongororo yedu yakazara: Google kabhodhi
Microsoft yakashamisa munhu wese payakapinda munyika yechokwadi uye yakawedzera chokwadi. Yakafumura iyo Microsoft HoloLens headset, iyo inoshanda ne Windows Holographic, tekinoroji inowedzera mifananidzo ye3D munyika yakatikomberedza tese. Nehunyanzvi izvi zvinonyanya kuwedzerwa kupfuura chaiko chaiko, asi zviri kutamba munzvimbo imwechete seimwe yeaya mamwe masisitimu, neMicrosoft ichidaidza kuti Mixed Reality.
Microsoft inoda kuunza yakawedzera zvinhu zvechokwadi mune zvese zvinhu zvepasirese. Zviripachena, izvo hazviitike neziso rakashama, asi vashandisi vakapfeka HoloLens vachakwanisa kuona mifananidzo yehorographic yakafukidzwa pazvinhu chaizvo pamberi pavo. Yakazara Windows 10 system yakavakirwa mune headset uye inomhanya ichibva bhatiri, saka haina zvachose untethered.
Iyo headset inoratidza mifananidzo yedhijitari mune yako chaiyo-yepasi munda wekuona. Iwe unogona ipapo kuona uye kunyangwe kushamwaridzana nezvinhu izvi zvakavezwa-digitized sekunge vari mumba newe. Uchishandisa Kinect -style tech kuti uone mitezo uye mirairo yezwi, iyo sisitimu inoratidzira 120-degree munda wekuona pane ese ari maviri axis uye inokwanisa kududzira kwakakwirira kutaridzika.
Verenga ratidziro yedu yakazara: Microsoft HoloLens 2